Ra’iisul wasaare ku xigeenka oo xilka u kala wareejiyey qaar ka mid ah wasiirradii dhawaan la magacaabay. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaare ku xigeenka oo xilka u kala wareejiyey qaar ka mid...
Ra’iisul wasaare ku xigeenka oo xilka u kala wareejiyey qaar ka mid ah wasiirradii dhawaan la magacaabay.
Wasiirada xilka wareejiyey ayaa kala ah wasaaradaha shaqada iyo arrimaha Bulshada mudane sadiiq warfaa, haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwo Deeqa yaasiin Xaaji, hawlaha guud, guriyeenta iyo dib -u-dhiska Mudane Cabdi Aadan Hoosoow, awqaafta iyo arrimaha diinta Sheekh Nuur Maxamed Xasan iyo wasiiru dowlaha xafiiska ra’iisul wasaaraha Mudane Cabdullahi Xaamud.
Previous articleTirada dadka Soomaalida ee uu ku dhacayo Covid-19 oo kordhaya.
Next articleColumbus Ohio: Wacyi-galin loo sameynayo dhalinyarada isticmaasha Daawooyinka daroogada ah.